I-China Uhambo lwezinkondlo – Uhambo oluya eQiandao Lake abakhiqizi nabaphakeli | UMia Creative
Ngo-Okthoba 17, ozakwethu abavela emnyangweni wokuqala webhizinisi bakulungele ukuya echibini elihle leQiandao, futhi ihora lokujabula selizoqala!
Isimo sezulu ngalolo suku sasiqabula kakhulu, futhi ubuhle bendlela babuhle futhi. Izimila eziluhlaza okwesimaragidu nezakhiwo ezahlukahlukene ebangeni zakha isithombe semvelo nesibhakabhaka esiluhlaza, okwenza abantu bazizwe bengcono.
Ekuhlekeni endleleni, ngemuva kokuhamba amahora angaphezu kwangu-2, wonke umuntu ugcine efikile e-villa esivele ibekiwe. Le ndlu itholakala osebeni lwechibi elihle laseQiandao. Vula iwindi bese uthola umbono obanzi wesimo sangaphandle, uthathe umoya opholile, bese ugeza umphefumulo wakho. Kukhona ama-swing, ama-slides, udaka lwe-DIY nezinye izindawo zokuzijabulisa ngaphandle, nezingane nazo ziyajabula
Intambama yokuqala yohambo yiTianyu Observation Deck edumile. IDianyu Observation Deck itholakala kwiTianyu Mountain. Intaba ayiphakeme. Ukuphakama kuphakathi kwamamitha angu-235 no-310. Yisiteji sokubuka esihle kakhulu seQiandao Lake. Ngemuva kokukhuphukela phezulu ngempumelelo, imi endaweni yesikhulumi yokubuka esiqongweni sentaba iTianyu, inomfutho wokuba "phezulu esiqongweni sentaba futhi ubheke izintaba". Ipulatifomu yokubuka iphezulu esiqongweni sentaba, inokubukwa okubanzi nokubuka kwephaneli kwezwe elizungezile, umfudlana ongapheli weQiandao Lake Bridge, ukushona kwelanga okuhle kakhulu kweQiandao Lake, kanye naleli chibi elehlukile kanye nezindawo ezinhle zezintaba.
Isitobhi sesibili-Hongye Bay.
IHongye Bay ingekaPingfeng Scenic Area enkabeni yedamu laseQiandao Lake Scenic Area. Itholakala phakathi kweXiaojinshan Peninsula neJinxian Islands, eyaziwa kakhulu njengeXiaojinshan. Izinga ethekwini lifana nesibuko, ichibi licacile futhi liluhlaza okwesibhakabhaka, futhi ukubonakaliswa kwezintaba namahlathi kucacile futhi kuyakhanya; iziqhingi zimi mpo futhi zivundlile, kanti indawo icebile, ineziqongo, izigodi, nemithambeka, futhi ibizwa nge-maze yamanzi
Ngokungazi, isikhathi safika kusihlwa, futhi izulu laliconsa. Wonke umuntu ushayele imoto wabuyela e-villa, futhi impilo enhle yasebusuku yaqala!
Wonke umuntu ubuthanele usofa ukuzobuka umdlalo, ubumnandi nokudla, obekubukeka kukuhle kakhulu ngalobu busuku bemvula.
Muva nje, kubukiswa ifilimu ethi “My Hometown and Me” ezweni lonke. Phakathi kwazo, iFuwen Township Primary School enezingilazi ezinamabala zihlaba umxhwele abantu bezwe lonke. Lapha siya khona ngosuku olulandelayo.
Indlu yothingo ezintabeni ifihla amaphupho enganekwane yobuntwana. Imibala engama-26 ihlangana. Indlu yengilazi ephambi kwakho isiphenduke indawo yokuhlala ama-fairies. Ingilazi esobala ipendwe ngemibala ephuphayo. Indlu engaphansi kwesibhakabhaka esiluhlaza iyakhanya futhi yinhle. Shaya amafu amhlophe, ushiye amahlathi aluhlaza ukuwaphelezela.
Umngcele omhlophe uchaza amaqhugwane kanti izindlu eziyizitaki zinobuciko obengeziwe. Le nyoni imi ocingweni, kuthi ama-rose akhuphukayo akhuphukele onyakeni. Izimbali zizungeze isikole samabanga aphansi. Amakhona omuzi muhle. Yiba yingadi encane.
Ngibheka isithombe esasiphansi, sazelula sabe sesiba mfushane, sikhumbula isikhathi lapho ngangisemusha, kwavela ukuthi sasingenankathazo, futhi nomculo ka "Little Boy" wezwakala ezindlebeni zami, owawulungele kakhulu isigcawu.
Emzileni wenjoloba, utshani kancane kancane bathatha umbala wekwindla, kwathi i-osmanthus encane yaqhakaza ezihlahleni. Lapho kuvunguza umoya, iphunga lalichichima lifike esicongweni senhliziyo. Umbala wekwindla wensimu wawugcwele, futhi udonga lwalungavalwa. Odongeni lwasekhempasini, bekukhona Imidwebo edwetshwe ngesandla eveza ubuhle bemvelo futhi ifihle ubumsulwa bezingane zabantu abadala.
Izingcezu zamapaneli acrylic anemibala nazo zingakha isikole esihle enhliziyweni yakho. Ngubani othi amaphupho angaba amaphupho kuphela. Lapho amaphupho ekhonjiswa ngokweqiniso, bathola ukuthi umhlaba ungaba muhle kakhulu.
Izandla eminyango nasemawindini, izinga lokushisa lisale engilazini, futhi izithunzi ezikumawindi engilazi nazo zinokukhazimula okukhanyayo, amakhona omlomo aphakanyisiwe, nezwe lihle kakhulu.
Uhambo olujabulisayo oluya eQiandao Lake seluphelile. Lolu hambo alugcinanga ngokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamalungu omnyango, kodwa futhi lwavumela wonke umuntu ukuthi amukele umsebenzi olandelayo ngesimo esingcono. Masiqhubeke sisebenze kanzima futhi siqhubeke nohambo olujabulisayo ngonyaka ozayo